Horizon & Vision Fitness ayaa bilowday inay iibiyaan 2015 Black Friday horay! Qiimaha ugu hooseeya ee xilli ciyaareedka wuxuu bilaabmaa hadda! Adigoo isticmaalaya lambarka ku-darka BLACKFRIDAY markaad bixiso, waxaad heli kartaa maqaar bilaash ah oo bilaash ah iyada oo ku dhawaad ​​treadmill kasta, elliptical, baaskiilada jimicsiga iyo mashiinka rowing oo laga heli karo boggooda!
Black Friday Bonanza ee Horizon & Vision Fitness! Qiimaha ugu hooseeya ee Sanadka, oo lagu daray Nolol Fudud oo Bilaash ah Xulo xulashada Cardio Mashruucyada leh CODSIGA BLACKFRIDAY! Xeerka Koodhka: BLACKFRIDAY
Qaar ka mid ah Horizon Fitness Black Friday 2015 waxaa ka mid ah:
- Horizon Fitness T101 Treadmill oo kaliya $ 649.99
Horizon Fitness QNUMX Treadmill - Hadda oo kaliya $ 101, oo lagu daro isticmaalka lambarka nambarka BLACKFRIDAY si aad u hesho mashiinka jirdhiska oo bilaash ah! Xeerka Koodhka: BLACKFRIDAY
- $ 350 oo ka baxsan Horizon Fitness EX-59 Elliptical
Black Friday Bonanza! Save $ 350 ka baxsan Horizon Fitness EX-59 Elliptical, oo lagu daro isticmaalka lambarka ku-dul-wareegga ah ee BLACKFRIDAY si aad u hesho jimicsiga fayadhowrka oo bilaash ah! Xeerka Koodhka: BLACKFRIDAY
- $ 600 oo ka baxsan Oxford Rower!
Black Friday Special! Ku badbaadi $ 600 adoo ka helaya Oxford Rower ee Horizon Fitness! Dammaanad Maaliyadeed iyo 30 Maalin Dammaanad-qaadid!
Horizon & Vision Fitness waxay sidoo kale bixisaa lacag bille ah oo bilaash ah! Iyada oo heerarka gaarka ah ee maalgelinta gaarka ah, waxaad ka iibsan kartaa Horizon treadmill ama elliptical sida ugu hooseeya $ 57 bishiiba. Sidoo kale markaad ka iibsato mashiinka jimicsiga ee Horizon Fitness, waxaa jira dayactir dayactir ah 30 iyo maraakiib bilaash ah amar kasta!
Tani Black Friday 2015 Horizon Fitness Sale waa Valid ilaa Sunday 11 / 29 / 15